Mareykanka oo Qoor Qoor u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha Galmudug | Caasimada Online
Home Warar Mareykanka oo Qoor Qoor u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha Galmudug
Mareykanka oo Qoor Qoor u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha Galmudug
Muqdisho (Caasimadda Online) – Safiirka Dowladda Mareykanka u fadhiyo magaaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya Amb Yamamoto ayaa ka hadlayey doorashadii Maanta ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
“Geedi socodka siyaasadeed ee Galmudug waa bilowga geedi socodka dib u heshiisiin sal ballaaran. Amb Yamamoto wuxuu ugu baaqayaa qof walba inuu ku biiro wada hadal nabadeed isla markaasna laga fogaado qalalaasaha” .
Warka kasoo baxay Safaarada Maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Safaarada si dhow ula socotay hanaanka Doorashada Galmudug isla markaana ay soo dhaweynayso Madaxweynaha ee Maamulka Galmudug.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Amb Yamamoto uu halmabalyo u dirayo Madaxweynaha cusub ee Galmudug loo doortay Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) taasoo muujineyso inuu Mareykanka aqoonsaday doorashadii Maanta ka dhacday Dhuusamareeb.
Axmed Cabdi Kaariye ayaa ku soo baxay Wareegii 1 aad ee Doorashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug waxa uuna helay 66 Cod oo ka mid 77 Cod ee Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug.
Axmed Cabdi Kaariye ( Qoor Qoor) oo loo doortay Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa waxaa la tartamay Musharixiinta kala ah, Cabdiraxman Axmed Sabriye,Axmed Shire Maxamed (falagle), Axmed Cabdullaahi Samater.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka kasoo baxay Mareykanka
“Geedi socodka siyaasadeed ee Galmudug waa bilowga geedi socodka dib u heshiisiinta sal ballaaran, Amb Yamamoto wuxuu ugu baaqayaa qof walba inuu ku biiro wada hadal nabadeed oo ka fogaado qalalaase. hambalyo Madaxweynaha cusub ee la doortay Axmed Qoor Qoor. Hadda waa in aan diirada saarno mudnaanta koowaad ee Amniga Soomaaliya”